कृषि र पर्यटनको फ्यूजन, चापाकोट एग्रो टुरिजम् :: Setopati
कृषि र पर्यटनको फ्यूजन, चापाकोट एग्रो टुरिजम्
सेतोपाटी संवाददाता पोखरा, फागुन ४
मुलुककै अग्रणी पर्यटकीय स्थान पोखरा, धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्पदाहरूले भरिपूर्ण छ।
विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकका लागि विदा मनाउने उत्कृष्ट गन्तब्य हो पोखरा। यहाँका फेवाताल, रूपाताल र वेगनास ताल, ताल बाराही, विन्ध्यवासिनी, पातले छाँगो, चमेरे गुफा, महेन्द्र गुफा, आदि प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण हुन्।
अन्नपूर्ण र धौलागिरी क्षेत्रका दर्जनौं पदयात्राको सुरू र अन्त्य हुने विन्दु। पछिल्लो समय साहसिक गन्तव्यका रूपमा पनि पोखरा स्थापित हुँदैछ।
प्याराग्लाईडिङ, क्यानोनिङ, बोटिङ, फिसिङ, र्‍याफ्टीङ, बन्जी, अल्ट्रालाइट, जिप फ्लायरजस्ता साहसिक गतिविधिले थप पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ।
माछापुछ्रेको काखमा बसेको यो सहर एसियामै सुन्दर पर्यटकीय शहरमा पर्छ। उत्तरमा टल्कने अन्नपूर्ण हिमश्रृंखला, माछापुछ्रे, धौलागिरी आदि हिमालले पोखराको शोभा बढाएको छ। सफा र शान्त, एसियाकै सुन्दर सहर पोखरा।
पोखराबाट करिब ८ किमी पश्चिममा कृषि पर्यटन र होमस्टेको संयोजनमा आधारित चापाकोट एग्रो टुरिजम् फार्मस्टे सञ्चालनमा आएको छ। यसलाई लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा बिताएका तारानाथ पहारी र राजु दहालले सञ्चालन गरेका हुन्।
चापाकोट एग्रो टुरिजमको सुरूवात?
करिब ३५ रोपनीको क्षेत्रफल ओगटेको एग्रो टुरिजम फार्मको उत्तरपूर्वमा पामे, लौरूप फाँट, हर्पन खोला(फेवातालको मुख्य स्रोत) छन्। यस्तै उत्तरमा अन्नपूर्ण, माछापुछ्रेजस्ता हिमश्रृंखला छन् भने पूर्वदेखि दक्षिणसम्म ४८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको वाम्दी सामुदायिक वनले घेरिएको छ।
गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्च (भिटोफ-कास्की) शाखाका संस्थापक अध्यक्ष तारानाथ पहारी र उपाध्यक्ष राजु दाहालले कास्कीसहित पश्चिम नेपालका अधिकांश जिल्लाका गाउँ गाउँमा पुगेर अध्ययन र अनुसन्धान गरे।
आफूहरू गाउँ गाउँमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि एग्रो टुरिजमको सोच पलाएको सञ्चालक राजु दाहालले बताए। ‘हामीले गाउँ पर्यटन एक्स्पलोर, भ्रमण र प्रवर्धन गर्ने क्रममा गण्डकीका कुना काप्चाका होमस्टेमा पुग्यौं,’ उनले भने, ‘घुम्ने क्रममा त्यहाँका गाउँले जीवन, रहनसहन, खानपिनसँगै संस्कृति अध्ययन, अवलोकन र प्रवर्धन गर्ने अवसर जुर्‍यो।’
भिटोफको नेतृत्वमा छँदा कास्की, लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जाका विभिन्न गाउँघरमा पुग्ने मौका मिल्यो। त्यहीँ बेला कुषिमा आधारित पर्यटन गर्ने सोच पलाएको अर्का सञ्चालक पहारीले भने। ‘सहरी लजको झल्को र गाउँले वातावरण सहितको लज फार्मस्टे - होमस्टे र लजको हाइब्रिड हो,’ उनले भने।
होमस्टेमा गाउँले जीवनशैली, रहनसहन, अर्गानिक खानपिन, संस्कृति र वासको व्यवस्था हुन्छ भने चापाकोट एग्रो टुरिजममा आफ्नै कृषि फार्ममा उत्पादित खानपानसहित बास बस्ने व्यवस्था छ।
‘होमस्टेमा खानपिनसहित संस्कृति अवलोकन गर्न पाइन्छ, यहाँ अर्गानिक खाना र वास बस्न मिल्छ। त्यसैले हामी यसलाई ‘चापाकोट एग्रो टुरिजम फार्मस्टे' भनेर प्रवर्धन गरिरहेका छौ,’ पहारीले भने।
चापाकोट एग्रो टुरिजममा के के छन्?
करिब ३५ रोपनीको क्षेत्रफल समेटिएको एग्रो टुरिजम फार्ममा खोरभरि लोकल कुखुरा, हाँस र बोइलर छन्।
गोठमा दुध दिने गाई छन्। माछा पालिएको छ। बारीमा अर्गानिक सागसब्जी र विभिन्न फलफूलका बोटबिरूवा रोपिएको छ।
‘यहाँ ४ हजार क्षमताका वोइलर फार्म र २ हजार क्षमताका लोकल कुखुरा अटाउने खोर निर्माण गरिएको छ। ५० वटा हाँस अटाउने खोर र १८० क्षमताको बाख्राका खोर छन्’, सञ्चालक दाहालले भने, ‘त्यस्तै ५ वटा गाई र ८ वटा भैसी राख्न मिल्ने गोठ बनाइएको छ। यस्तै दुई वटा माछा पोखरीमा करिब २५ सयसम्म माछा पाल्न सकिन्छ।’
बारीमा सिमी, साग सब्जी, काउली, गोलभेडा फलिरहेका छन्। २०० वोट कागती लगाइएको छ, १५० वोट सुन्तलाका बिरूवा रोपिएको छ। अलैची, अम्रिसो, एवोकार्डो र परीक्षणका लागि ड्रागन फ्रुट पनि लगाइएको छ।
फार्मस्टेमा अर्गानिक खाना र आरामदायी वास
यहाँ आउने पाहुनाले सुद्ध दुध, दही र घिउ खान पाउँछन्। यहाँकै लोकल कुखुरा या हाँसको मासु र ताजा माछाका साथै यहीँ उत्पादित सागसब्जी खुवाउने गरेको सञ्चालक दाहालले जानकारी दिए।
फार्मस्टेमा अर्गानिक खाना र आरामदायी वासको व्यवस्था छ। वरिपरि जंगलले घेरिएको फार्मस्टेमा रात विताउँदा एकान्त महसुस हुन्छ। जंगलमा चिरबिर चराको अवाजले छुट्टै आनन्द हुन्छ।
गाउँले शैलीमा बनाएका ३ वटा घर छन्। एउटा पुरानो घर मर्मत गरेर बनाएको छ। दुई वटा नयाँ कटेज बनाइएको छ।
‘विभिन्न होमस्टे घुम्ने क्रममा एट्याच वाथरुमको अभाव देखियो। त्यसैले हामीले ३ वटा रूममा उक्त सुविधा थपेका छौं। २५ जनासम्म अटाउने हल र ९ वटा छुट्टै कोठा छन्। कर्मचारीका लागि छुट्टै कोठा छन्’, सञ्चालक दाहालले भने।
यहाँ एक रातमा कम्तिमा ५० जनाले सजिलै बास बस्न सक्छन्। सञ्चालक पहारीका अनुसार शान्त वातावरण, लौरूपको फाँट, नागवेली हरपन खोलाको दृश्य, हिमाल र सूर्योदयको दृश्यावलोकन गर्दै अर्गानिक खाना र बास बस्न पाइने एउटा उत्कृष्ट गन्तब्य हो।
‘एकै पटक ५० जनासम्म खान मिल्ने ठाउँ पनि छ। बन भोजको लागि उपर्युक्त यहाँ पानी , विजुली , भाडा कुडा, साउण्ड सिस्टम र सहयोगी कर्मचारीसमेत उपलब्ध छ’, पहारीले भने।
एकान्त होलिडे स्पट
यहाँ आउने पाहुनालाई बारीमै उत्पादित मौसम अनुसारको तरकारी र लोकल चामलको खाना पाइन्छ। मांसाहारी खानामा बोइलर, लोकल कुखुरो, खसी, हाँस र माछा पाहुनाको इच्छा अनुसार तयार गरिन्छ। खानासँगै दुध, दही र घिउ पाइन्छ।
पोखरा र आसपासबाहेक काठमाडौंदेखि पर्यटन व्यवसायी, सहकारी टोली, बैंकका कर्मचारी, कृषक घुमघाम र छुट्टि मनाउन फार्मस्टेमा आइसकेका सञ्चालक दाहालले जानकारी गराए।
त्यस्तै कलेज तथा स्कुलका विद्यार्थी पनि अवलोकन भ्रमणका लागि आइसकेका छन्।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण फार्ममा ‍थप संरचना बनाउन नसकेको दाहालले जानकारी दिए। ‘फागुनबाट हामीले फार्म सञ्चालनमा ल्यायौं, चैतबाट लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन पछि कामदार पाउनै मुश्किल भयो। त्यसै थप संरचना बनाउन चाहेर पनि सकेनौं’, उनले भने।
देशको राजनीतिक अस्थिरता र नेपालमा अवसर छैन भन्दै हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। गाउँघर रित्तिएका छन् , खेतबारी बाँझा भइसकेका छन्। यस्तो बेला पहारी र दाहालजस्ता केही युवाले स्वदेशमै उद्यम गरि रोजगारी सिर्जना गर्न तम्सिएका छन्।
अधिकांश समय फार्ममा बिताउने उनीहरू २-३ दिन बिराएर पारिवारिक भेटघाट र मिटिङमा सहर पस्छन्। बाँकी समय कर्मचारीसँगै गाई, बाख्रा, कुखुरा, माछाको रेखदेख खटिन्छन्। बारीमा लगाएको तरकारी गोडमेल गर्छन्, बस्छन्।
पोखरा लेकसाइड अर्थात् हल्लनचोकदेखि सेदी बगर, खपौंदी, भुकुण्डे, पामेहुँदै लौरूपसम्म नियमित बस लाग्छ। त्यहाँबाट १० मिनेट हिँडेपछि चापाकोट एग्रो टुरिजमस्थल पुगिन्छ। निजी सवारीमा जाने लेकसाइडबाट २०-२५ मिनेटमै चापाकोट पुग्छन्। एग्रो फार्मसम्म बाइक र गाडी सहजै पुग्छ।
राजु दाहालः ९८५६०६१९७५
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ४, २०७७, १६:०८:००